Izicelo zeAntivirus zeMac ziyakhula, kodwa akukho mfuneko | Ndisuka mac
Mva nje sibona uthotho lweendaba ezinxulumene ne-adware, i-malware okanye ezinye iintsholongwane ezivela kwiWindows zisiya kwinkqubo yokusebenza ye-macOS, ke ezo zicelo zintsha sizifumana kwivenkile ye-Mac App zihambelana ngqo ne-antivirus. Umbuzo apha ucacile: Ngaba kunyanzelekile ukuba ufake usetyenziso lwe-antivirus kwi-Mac?
Uninzi lwabo bebekhona bekune-Mac iminyaka emininzi kwaye khange basebenzise i-antivirus, abanye abaninzi ngamanye amaxesha banokufuna ukusetyenziswa kwe-antimalware, kodwa Uninzi lwabasebenzisi beMac abahlali banezikhalazo malunga neentsholongwane nangona kuyinyani ukuba ezi ziyanda ngakumbi nangakumbi.
Ngokomgaqo, ingcebiso ephambili ngaphambi kokufaka i-antivirus okanye hayi, kwi-Mac ayisiyokuyifaka. Ukuba ikhompyuter isebenza ngokwesiqhelo, asinangxaki zokwehla okanye asinakuqaphela nto ngaphandle kwesiqhelo, kungcono ukuhlala ngaphandle kwe-antivirus. Uthintelo kwi-Mac aluncedo, ke kungcono ukuyenza ngaphandle kwezi zicelo.
Njengoko sihlala sisitsho kwezi meko, ukuqonda okuqhelekileyo kokubini kwi-macOS nakwezinye iinkqubo zokusebenza sisiseko sokungosulelwa yimalware, i-adware okanye efanayo, ke lumka ngento esiyikhuphelayo kwinethiwekhi ngakumbi apho siyikhuphela khona . Ukuba nezicelo ezininzi ze-antivirus kwivenkile ye-Mac yonke imihla kunye nokuzifaka akuthethi ukuba siya kukhuseleka ngakumbi nge-Mac yethu, ngokulula kukuba abaphuhlisi bayazi malunga ne-malware entsha eqhuba kwinethiwekhi kwaye basebenzise le meko ukwazisa i-antivirus yabo , kodwa siyaphinda nyani eyona ntsholongwane kwiMac yakho nguwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Izicelo zeAntivirus zeMac ziyakhula, kodwa akukho mfuneko yazo
Ngokunyaniseka, ingqiqo iyandixelela ukuba ungeniso alusekelwanga kakuhle. Phakathi kwabanye, kuba ndiyakholelwa ukuba ukuqonda okuqhelekileyo kufuna ulwazi kwaye kulula kakhulu ukuba umntu onolwazi oluncinci olunxulumene neekhompyuter okanye iintlobo / iindlela zosulelo ukuba wosulelwe, kuba ingqiqo encinci inokusebenza xa ungazi ukuba kufuneka ulumke okanye usebenzise ingqiqo.
Unyanisile koko ukuthethayo, kodwa "ukuqonda okuqhelekileyo" endifuna ukubhekisa kuko kwinqaku lelo kukuthenga usetyenziso apho ludlala khona ngaphandle kokuqhubela phambili kubuchule bekhompyuter. Ngokucacileyo nabani na unokuchaphazeleka yintsholongwane kwikhompyuter yakhe kwaye angazi, kodwa kumaxesha amaninzi ukufikelela kwi-Mac yethu yentsholongwane kungenxa yokukhuphela ngokungekho semthethweni, bekholelwa ekubeni "bazokunika iNetflix" okanye efanayo Iindaba esizibona yonke imihla. Kungenxa yoko le nto ndithetha ngengqiqo kweli nqaku.
Ndiyabulela kakhulu ngokwabelana ngombono wakho serracop
I-7-in-1 hub enesidibanisi se-USB C